Usephenduke umgodi onganukwanja umculi wokholo | News24
Usephenduke umgodi onganukwanja umculi wokholo
Durban - Usephenduke umgodi onganukwanja umculi wowokholo osolwa ngokungaziphathi kahle nokungalawuleki uma esebenza nabanye.
USechaba Padi oke waba sematheni ngenkulumo ayethule ngesikhathi kunenkonzo yesikhumbuzo kaLundi Tyamara eGrace Bible Church, ePimville, eSoweto, lapho egxeke khona izikhulu zezinkampani zokuqopha umculo, kuthiwa uchithwa yizinkampani zomculo.
Ngokuthola kweLANGA LangeSonto, lo mculi ayikho inkampani asayine ngaphansi kwayo kanti nalezo afaka kuzona izicelo kuthiwa ziyamchitha zikhala ngokungaziphathi kahle kwakhe.
Umthombo waleli phephandaba osondelene nezindaba zalo mculi uthi uyayifuna inkampani azoqopha ngaphansi kwayo kodwa ayikho esazimisele ngokumsayinisa.
"Iningi lezinkampani likhala ngokuthi kunzima ukusebenza naye ngoba akalawuleki futhi ubuye ahluleke nokugcina izikhathi zomsebenzi. Unayo inkampani yakhe kodwa uyayidinga inkampani enesipiliyoni azosebenza ngokubambisana nayo ukuze izinto zakhe zihleleke," kusho umthombo.
OLUNYE UDABA: Uphelele endaweni yengozi 'uSdumo'
Lo mthombo uthi enye yezinkampani aseke wazama kuyona inhlanhla ngekaSipho Makhabane iBig Fish Music.
Ebuzwa yiLANGA LangeSonto uMakhabane ukuphikile ukuthi umchithile lo mculi.
"USechaba ngisebenzile naye esengaphansi kweBula kodwa okwamanje ngisematasa nabanye abaculi abasakhula. Abantu bayazi ukuthi ngisebenza kakhulu ukukhulisa abaculi abasafufusa ngakho ngigxile lapho," kusho uMakhabane, engeza ngokuthi akathandi ukuphawula kakhulu ngodaba oluthinta uSechaba.
Wenqabile ukuphawula uSichaba, wathi akazimisele ngokukhuluma nabezindaba.
"Kumele uze usho izinto ezinohlevane ukuze abezindaba bakulandele. Uma uziculela ungasho lutho abakulandeli ngoba abanandaba nomculo kodwa babheke ezindabeni ezifunwa yibona," esho ekugcizelela ukuthi akazimisele ukuphawula.